मतगणना पछि मोदीले भने भारतले फेरी जितेको छ ! (यस्तो छ मत परिणाम)
भारतमा भएको लोकसभा चुनावको मतगणना भैरहेको छ । अहिले सम्मको मतगणना अनुसार भारतीय जनता पार्टी निकै अगाडि देखिएको छ । त्यस्तै भारतीय कंग्रेस भने कमजोर देखिएको छ । जारी मतगणनामा भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय गणतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ३०० भन्दा बढी सिटमा अगाडि रहेको छ । बीजेपी एक्लै २८० भन्दा बढी सिटमा अगाडि रहेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) १०० आसपास सिटमा अगाडि रहेको छ भने अन्य दल १०० भन्दा बढी सिटमा अगाडि रहेका छन् । ५४३ सिट रहेको भारतीय लोकसभामा सरकार बनाउन २७२ सिट आवश्यक पर्छ ।
उत्तर प्रदेशको वाराणासीबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका मोदी मतगणना जारी रहँदा चार लाख ७६ हजार ९६३ मतका साथ अग्रस्थानमा छन् । दोस्रो नम्बरमा समाजवादी पार्टीकी शालिनी यादव छिन् । उनले एक लाख ४५ हजार ११ मत प्राप्त गरेकी छिन् ।
भाजपाको जित नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै फेरि एकपटक भारतको जित भएको बताएका छन् । ‘सबैको साथ + सबैको विकास + सबैको विश्वास = विजयी भारत’, प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीट गरेका छन् । यो सँगै मोदीले भाजपालाई सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई पनि दिएका छन् ।
* प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिए बधाई !
विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखहरुले मोदीलाई बधाई दिसकेका छन । टाईम्स अफ ईन्डियाका अनुसार रसियाका रास्ट्रपति, चिनका प्रधानमन्त्री लगाएतको बधाई आईसकेको छ । यस्तै मोदी र उनको दल बहुमतसहित पुनः निर्वाचित हुने निश्चित देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट गर्दै बधाई दिएका हुन्। ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई लोकसभा चुनाव २०१९ मा प्राप्त गरेको चुनावी जीतका लागि बधाई दिन्छु’, ट्विटरमा प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, ‘आगामी दिनमा सफलताको कामना गर्छु। निकट सम्बन्धमा रहेर काम अघि बढाउन प्रतीक्षारत छु।’